चौबीस घण्टे आकस्मिक सेवा तीन सातादेखि ठप्प « प्रशासन
चौबीस घण्टे आकस्मिक सेवा तीन सातादेखि ठप्प
प्रकाशित मिति : 17 April, 2021 8:49 pm
दार्चुला । महाकाली नगरपालिका–९ का एक महिलालाई शुक्रबार सुत्केरी व्यथा लाग्यो । सदरमुकाम खलङ्गामा बस्दै आएकी ती महिला व्यथा लागेपछि नजिकैको जिल्ला अस्पतालमा गए । महिलाको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने देखियो तर जिल्ला अस्पताल दार्चुलामा एक जना पनि चिकित्सक थिएनन् ।
चार चिकित्सकको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा चिकित्सक नहुँदा व्यथा लागेका महिलालाई गोकुलेश्वर सिफारिस गरिएको हो । उनलाई महाकाली नगरपालिकाको एम्बुलेन्समार्फत गोकुलेश्वर अस्पताल पु¥याइएको थियो । यो त एक प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । उनीजस्तै दर्जनौँ गर्भवतीले अहिले जिल्ला अस्पताल पुगेर गोकुलेश्वर वा पिथौरागढ सिफारिस हुनुपर्ने बाध्यता छ । अस्पतालमा बच्चा पाउन आउने गर्भवतीको जिल्लामै सुत्केरी हुन नसक्दा बिचल्ली भएको छ । सहजरूपमा जिल्लामै हुने शल्यक्रियाका लागि गोकुलेश्वर जाँदा रु छ हजार तिर्नुपरेको आफन्तजन बताउँछन् ।
गर्भवतीका लागि भन्दै चौबीसै घण्टे आकस्मिक प्रसूति सेवा केन्द्र राखिएको तर जिल्ला अस्पतालको आकस्मिक प्रसूति केन्द्र तीन सातादेखि बन्द छ । जिल्लाको मुख्य अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा लथालिङ्ग हुँदा पनि सरोकारवाला निकाय भने उदासिन बनेको बिरामी बताउँछन् । जिल्ला अस्पताल दार्चुलामा आकस्मिक सेवा हेर्दै आएका मेडिकल अधिकृत नवीनकिशोर मल्ल धनगढी र अस्पताल निमित्त प्रमुख एवं एमडिजीपि डा. आर्दश लिम्बू काठमाडौँ तालिममा गएपछि आकस्मिक सेवा बन्द भएको छ । शल्यक्रिया गर्नका लागि चिकित्सक चाहिन्छन् प्रसूति सेवा कार्यरत एक स्टाफ नर्सले भनिन्, “हामीले त्यो गर्न सक्दैनौँ ।”
चिकित्सक नहुँदा चैत दोस्रो सातादेखि अस्पतालमा शल्यक्रिया हुनसकेको छैन । अस्पतालमा आउने गर्भवतीलाई गोकुलेश्वर पठाउने गरिएको उहाँको भनाइ छ । शुक्रबार मात्र दुई सुत्केरी व्यथा लागेर आएका महिलालाई पठायौँ । अस्पताल हो तर सबै चिकित्सक एकैपटक तालिममा जाँदा अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा नाजुक बनेको उनको भनाइ छ ।
जिल्ला अस्पताल दार्चुलाका सूचना अधिकारी डम्मरदत्त भट्ट चिकित्सकहरूको तालिम परेका कारण जिल्ला बाहिर जानुपरेको बताउछन् । यस बीचमा बिरामी हेर्न गोकुलेश्वरबाट चिकित्सक मियाज अन्सारी एक साता जिल्ला अस्पतालमा काम गरेर फर्किएका छन् । शुक्रबार र शनिबार अस्पतालमा चिकित्सक नै छैनन् । प्रदेश सरकारमार्फत खटाइएका डा. देवेन्द्र नेगी आज बेलुकीसम्म आइपुग्ने अस्पतालले जनाएको छ । “बिरामीको चाप बढी नै छ”, उनले भने, “हामीले सक्दो सेवा दिएका छौँ”, भट्टले भने ।
अहिले अस्प्तालमा दैनिक ८० बढी बिरामी आउने गरेका छन् । पछिल्लो समय मौसममा आएको परिवर्तनका कारण रुघाखोकीका बिरामी बढी आउने गरेका छन् । एक जनामात्रै चिकित्सक हुँदा बिरामीले अस्पतालमा घण्टौँ कुर्नपर्ने बाध्यता छ । पछिल्लो समय अस्पतालमा दक्ष जनशक्तिसमेत छैन । दक्ष जनशक्ति नहुँदा गत मङ्सिरमा जडान गरिएको आइसीयू र भेन्टिलेटर शय्या प्रयोगमा आएको छैन । राससको सहयोगमा
Tags : आकस्मिक सेवा
14 May, 2021 7:53 pm
सेनाले ल्यायो विराटनगरबाट ४५९ सिलिण्डर अक्सिजन काठमाडौँ
काठमाडौँ । सेनाले आज गृहमन्त्रालयको संयोजनमा कासा विमानमार्फत ५९ सिलिण्डर
14 May, 2021 7:43 pm
प्रधानमन्त्रीद्वारा तीन हजार सिट क्षमताको सम्मेलन केन्द्र उद्घाटन
ललितपुर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गोदावरीमा निर्माण सम्पन्न भएको
14 May, 2021 7:30 pm
अक्सिजन, आईसीयू बेड र खोप लगायत औषिधको व्यवस्था गर्न देउवाको सरकारसँग माग
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना संक्रमणले उग्ररुप
14 May, 2021 7:20 pm
जेठ १३ गतेसम्म थपियो चितवनमा निषेधाज्ञा
चितवन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले निषेधाज्ञाको समय जेठ १३